अफ्रिकामा मात्रै झण्डै २ लाखको ज्यान जानसक्ने चेतावनी ! «
अफ्रिकामा मात्रै झण्डै २ लाखको ज्यान जानसक्ने चेतावनी !
Published : 8 May, 2020 8:05 am
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले कोरोना भाइरसको महामारी यदि अफ्रिकामा रोक्न सकिएन भने झण्डै २ लाखको ज्यान जान सक्ने चेतावनी दिएको छ । डब्लूएचओको एक अध्ययनले अफ्रिकी मुलुकहश्रमा कोरोना रोकथामका उपाय फेल भएमा यस महामारीको पहिलो वर्षमा नै अफ्रिकामा १ लाख ९० हजारभन्दा बढीको मृत्यु हुने चेतावनी दिइएको हो ।
अफ्रिकाका ४७ देशहरुको अवस्था विश्लेषण तथा प्रेडिक्सन मोडलको यो चेतावनी दिइएको बिबिसीले जनाएको छ । डब्लूएचओको अध्ययनअनुसार यदि अल्जेरिया, दक्षिण अफ्रिका र क्यामरुनमा रोकथामका उपायबारे ध्यान दिइँदैन भने त्यहाँको अवस्था थप भयावह हुनेछ । जसअनुसार स्वास्थ्य सेवाका लागि अबका दिन थप चुनौतीपूर्ण हुनेछन् र भारी संख्यामा मानिसहरु अस्पताल पुग्ने हुँदा धान्न सकिने छैन ।
अध्ययनमा अस्पतालहरुले आफ्नो क्षमता बढाउनुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ । मार्च २०२० मा गरिएको एक अध्ययनमा पत्ता लागेअनुसार अफ्रिकी क्षेत्रमा औसतमा १० लाख व्यक्तिमा ९ जनाका लागि मात्रै आइसीयू वार्ड उपलब्ध छन् । जबकि संक्रमण व्यापक बन्दै गएमा त्यहाँको स्वास्थ्य प्रणालीले नै धान्न सक्ने छैन ।
भखरै दियो चीनले सन्सार भरि यति ठुलो खुसीको खबर
चीनबाट सुरु भएर विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको भ्यक्सिन अब सबैभन्दा पहिले विश्वलाई चीनले
कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि संकलन गरिएको रगतको नमूना बाँदरले चोरेर लगेपछि भारतको एक मेडिकल कलेजमा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सीमामा जारी तनावको विषयलाई लिएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मुड ठीक